रसियाको पहाडहरूमा होटलहरूको चयन
आवास विकल्पहरू र यूलरको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा होटेलमा मनोरन्जन र मनोरन्जन गर्नुहोस्
पार्क होटल "मजाहोलोक" मानानकको किनारमा रहेको एक सुरम्य ठाउँमा अवस्थित छ जुन डननकको छेउमा अवस्थित छ, जुन डबल मोटबारी पर्यटकहरू "डलर" भनिन्छ।
कचौराको आँधीबेहरी पानी, निर्देशित ज sts ्गल र शुद्ध हिमाली हावामा, तपाईंलाई केवल रमाइलो र अविस्मरणीय छुट्टी दिन मात्र होइन। पार्क होटेलको परिदृश्य क्षेत्र prying आँखाहरु बाट टाढा छ र सुरक्षा गरीरहेको छ, जसले sevance र शान्तिको वातावरण सिर्जना गर्दछ।
पार्क होटल "MESESECK" मा विभिन्न कोटीहरूको संख्यामा आरामदायक होटेल समावेश गर्दछ (पर्याप्त सान्त्वनाका लागि मानकबाट)।
बिहानको खाजामा समावेश छ। कोठाहरूलाई पनि अनुमति छ। 400 सिटका लागि एक आरामदायक रेस्टुरेन्ट युरोपियन खाना, साथै नरम र तातो पेय पदार्थहरू प्रदान गर्दछ।
<< p> कर्पोरेट ग्राहकहरु को लागी कर्पोरेट ग्राहकहरु को लागी एक सम्मेलन कोठा छ। कथनको तुलनामा एक सानो खाडी, पानीले तपाईंलाई घामको समुद्रको किनारमा र सूर्यको बीचको पार्क क्षेत्रमा र नदीको बीचमा बनाउन अनुमति दिनेछ नदीको किनार।
नि: शुल्क समय एक आरामदायी छुट्टी कोठा, एक क्लासिक सौना, टर्कीप्रणा पारा र एक कन्ट्राउड पोल वा बिलियर्ड कोठा। कहीनको साथमा तपाईंलाई इक्स्ट्रियन र पैदल यात्रा र स्थानीय आकर्षणहरू भ्रमण गर्ने प्रस्ताव गरिनेछ।
गर्मीमा पार्कको पाहुनाहरूको लागि, बाहिरी पोल चलिरहेको छ। बच्चाहरूलाई तातो बच्चाहरूको पोखरी र बच्चाहरूको शहर (फोटो ग्यालरी हेर्नुहोस्), जाडोमा, जाडोमा तपाईंको डिस्पोजलमा स्की-देश स्कीइ or र स्कीर ढलानमा।
पार्क होटल पाहुनाहरूलाई कल्याण सेवाहरू (मसाज, फिन्यापोरोब, पेन्टियन ब्यारेल), हिमाल बाइबे, टेबल टेनिस र सजीब टेनिस र सशस्त्र टेनिस क्याबिनिसमा।
<< p> पार्क होटेलबाट टाढा छैन, जुन टाढाको पप आउट छ, "मलाई साथी भन?"
ISYNEENEBBRG र YESLEABINK र YESLEABINK को बीच, on 68 किलोमिटर, on 68 किलोमिटरबाट223 किलोमिटरबाट223 किलोमिटरबाट। कोलोससुको एयरपोर्टबाट प्राप्त गर्न तपाईंलाई 400 मिनेट चाहिने छ वा YECTEREENENBBRG बाट 1-1 .. घण्टा M5 मार्गमा होटलको सुविधाजनक स्थानले तपाईंलाई व्यक्तिगत यातायातमा मात्र नभई बसोबास गर्न अनुमति दिन्छ।
होटेल - मनोरन्जनको केन्द्रको कुल क्षमताको कुल क्षमताको साथ 300 भन्दा बढी कोठा छ। M5 मार्गमा सडक होटल र होटलहरू जहिले पनि आवास विकल्पहरू र थप सेवाहरूको ठूलो चयन प्रदान गर्दैनन्। यहाँ तपाईं हरेक स्वाद र वालेट को लागी छुट्टी विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ।
प्रत्येक छुट्टीरको आवश्यकताहरू गर्न गाह्रो। फौरोजियरमा एउटा कुटीर भाडामा लिनुहोस् गोपनीयताका फ्यानहरू। तपाईं सात आधुनिक घरहरूमा मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ (2 देखि225 व्यक्तिको) ट्र्याकबाट टाढा अवस्थित, ताल र पाइन जंगलको छेउमा। म केबाबहरू बल्दै छु, आगोको छेउमा बस्नुहोस् - हरेक घरको गुजब्बो ब्राजीर र फायरप्लेसको साथ।
सबै कुटीहरूमा सहजै रहनको लागि एक अलग सौना वा नुहाउने, टिभी र डीभीडी प्लेयर, एक डीभी र डीभीडी प्लेयर, एक टिभी र एक डीभीडी, कचोक हो।
भोज सुविधाहरू र बिलिर्ड तालिका। एक नयाँ ठूलो कुटीर मा - पौंडी पोखरी। कुटडाइटका लागि भुक्तान गर्दै, तपाईं स्वचालित रूपमा यो सबै तपाईंको निपटानमा प्राप्त गर्नुहोस्! अतिथिहरूले होटलको क्याफेमा खाजा र खाना खान सक्दछ।
पाहुनाहरूको प्लेसमेन्टको ख्याल राख्नु पर्दैन;
सबैले आत्मामा पाठ फेला पार्नेछन्, यदि अचानक तपाईं टेबलमा बस्न चाहनुहुन्न भने, प्रकृतिमा तपाईं सुन्दर फोटोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। / LI>
भवनको पहिलो तलामा - उत्पादन र औद्योगिक सामानहरूको साथ स्टोर। उत्सवको लागि, हामी क्याफे वा कुटीजमा हल वा तपाईंको प्राथमिकताहरूको पैमानेमा हल भाडामा लिन सक्दछौं। एक विशेष भोज मेनूले तपाईंलाई भाँडा माझ्न र होटल कोठामा निर्णय गर्न अनुमति दिनेछ - सान्त्वनाको साथ छुट्टी पछि रात बिताउनुहोस्। शहर बाहिरबाट छुट्टी समात्दै, तपाईं धेरै फाइदाहरू पाउनुहुनेछ:
क्याफेले होटलको पहिलो तलामा, शिकारको घरको शैलीमा बनाईएको, 600 र 100 व्यक्तिको लागि2कोठाहरू समावेश छन्। प्रमुख प्रशिक्षण र सेमिनारको लागि, 100 व्यक्तिको लागि कोठा भाडामा लिन सम्भव छ। Svrdlovsk क्षेत्र होटल प्रिजायर को सबै कुटपिट र मनोरन्जन साइटहरु बाट छनौट गरेर, तपाईं दैनिक चिन्ता, आराम र सफा हावा, प्रकृति को सौन्दर्य को मजा लिन सक्नुहुन्छ! सान्त्वनाको साथ प्रकृतिमा आराम गर्नुहोस्!
मा होटलमा कसरी प्राप्त गर्ने
ekereinbberg बाट कार द्वारा: चेल्लीबिन्सस्क पछ्याउनको लागि, एसएमएमर स्ट्रिटल पुलिस 10 किलोमिटर छ, दोस्रो ईन्धन वामर पछि , होटल सडकमा खडा हुनेछ। बस द्वारा: जेन्टीबीन्कमा आउँदै गरेको ओर्कीरइनसबर्गको कुनै पनि बस स्टेशनमा, टिकटलाई SVRDLOVSK र चेरिलिन्सक क्षेत्रको सिमानामा लिनुपर्दछ। बस चालक 68 68 किलोमिटर रोक्न सोध्नुहोस्। होटल "prierizeriee"।